Aza be fangatak' andro rehefa manao zavatra | Madagascar features website
Home » Forums » Culture
Monday, August 13, 2012 - 02:44
Nisy tovolahy tanora, mpitovo anankiray izay saro-kenatra loatra.
Izy rahateo koa moa nanana aretina homa-miadana izay tsy nisy fanafana, fa dia miandry fotsiny ny hahatongavan' ny fahafatesana na ho ela na ho haingana.
Nalahelo azy mafy ny reniny, izay niaranitoetra sy nanara-maso azy mandrakariva.
Indray andro dia niera tamin’ny reniny izy, mba hitsangatsangana any an-tsena any.
Namela azy ny reniny raha izay no mba hahitany fifaliana.
Dia lasa izy nizaha ireo karazam-pivarotana samihafa nanemitra ny arabe.
Nahita fivarotana kapila mangirana na CD, izay firaketana ireo hira sy mozikan’ny mpanan-kanto izy. Niditra tao amin’ilay trano fivarotana izy ary akory ny hatairany nahita ity tovovavy mahafatifaty, mitovitovy taona aminy izay mpivarotra tao, izay tonga dia nanatona azy, sady nitsiky no nanontany azy hoe “Misy azoko hanampiana anao ve?”
Vao maika nientana ny fon’ilay tovolahy, tsy mbola nahita sy nahazo tsiky tahaka izany izy, toro tanteraka ny fony.
Niankanakana izy namaly sady nandray CD izay sendran’ny tanany teo : hi…hividy CD aho sady natolony ny vola.
Tsy nahajery ilay tovovavy akory izy ary avy hatrany dia saika handeha.
Tianao ve raha hofonosiko, hoy ilay tovovavy.
Nihatoka fotsiny ilay tovolahy sady natolony ny CD.
Lasa tany ambadika tany ilay tovovavy namono ny CD.
Natolony an’ilay tovolahy rehefa voafono. Lasa toy ny tsy teo ny tovolahy.
Tsy afaka tao an-tsainy ilay tovovavy nandritra ny alina. Tapakevitra izy ny ampitso fa hiverina any amin’ilay
Toy ny omaly ihany, tsy nahateny ilay tovolahy ary dia nividy CD hafa indray. Dia nofonosin’ilay tovovavy tany
ambadika tany indray ary natolony azy rehefa vita.
Nanomboka hatreo dia nivezivezy tany amin’ilay fivarotana hatrany ilay tovolahy noho ny fitiavany hahita an'ity tovovavy ity fotsiny. Tsy nisy azony natao anefa noho ny tahotra sy henatra, afa-tsy ny nividy CD izay sendran’ny tanany teo hatrany.
Notantarainy tamin’ny reniny izany taty aoriana ary namporisika azy ity farany mba hananany fahasahiana hamboraka izay ao am-pony.
Tapakevitra ny tovolahy fa hiteny ary ho sahy hamboraka izay mba faniriany.
Namantana tany amin’ilay fivarotana izy, vonona dia vonona tokoa. Indrisy anefa… niampy iray indray ny CD e!
Tamin’ity indray mandeha ity kosa raha vao lasa namono ilay CD tany ambadika tany ilay tovovavy dia napetrak’ilay tovolahy teo amin’ny latabany haingana ny nomeraon’ny telefonany. Nirifatra toy ny tsy teo izy raha vatany vao voarainy ny CD.
Andro vitsivitsy taty aoriana, naneno ny telefona. Ny reniny anefa no nandray izany ary ilay tovovavy io niantso mba hitady ny zanany.
Nifokofoko nitomany ilay reniny sady nanontany hoe tsy fantatrao angaha ?
Maty omaly izy !
Fahanginana no setrin’izay. Tsy nisy re afa-tsy ny fokofokon’ity reny safotry ny alahelo an-janany.
Andro vitsivitsy taty aoriana indray dia sendra nisavasava ny zavatra tao amin' ny efitranon’ilay tovolahy ny reniny. Ny
armoara fitahirizany ny fitafiany no novohainy voalohany.
Akory ny hagagany nahita ireto CD marobe, voafono tsara ary tsy nisy novahana akory na dia iray aza.
Tsy naharitra izy fa nandray CD iray ary nipetraka teo an-tsisimpandriana hamaha azy.
Kanjo iny nisy sombin-taratasy kely nilatsaka avy tao anaty fonosana. Noraisiny ilay taratasy kely, nisy soratra ilay izy.
Novakiany ilay soratra:
“Mahafatifaty ahy ianao ry tovolahy, tsy mba misy faniriana ny hiaraka amiko ve ao anatinao ao e!”
Nandray CD hafa indray izy ary dia nisy soratra tahaka ilay teo koa.
Tapitra novahany ny CD rehetra ary ny ankamaroany dia nisy soratra mitovitovy avokoa.
Hay rehefa mamono ilay CD any ambadika any ilay tovovavy dia sisihany soratra hatrany ao anatiny saingy tsy novahan’ilay tovolahy ny CD ka tsy hitany izany.
Raha misy zavatra kasainao hotenenina na hatao dia ataovy dieny androany izany.
Aza mangataka andro fa mety ho tara loatra ny rahampitso.
misaotra tsara!voaray ny
Permalink Submitted by Naïl on Wed, 08/15/2012 - 09:23.
misaotra tsara!voaray ny hafatra
Mankasitraka anareo nizara,
Permalink Submitted by Sipressy on Thu, 08/16/2012 - 12:42.
Mankasitraka anareo nizara, voaray ny hafatra : tena mampieritreritra B ilay tantara ary d hampiharina @fiainana tokoa. Hotsaroana lalandava mba tsy hangatak'andro lava. Tahian'ny Tompo :)